Xog: Sida ay u qaraxyadii maanta u dhaceen iyo wararkii ugu dambeeyey | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Xog: Sida ay u qaraxyadii maanta u dhaceen iyo wararkii ugu dambeeyey
Xog: Sida ay u qaraxyadii maanta u dhaceen iyo wararkii ugu dambeeyey
Dad ku sugnaa goobta ayaa sheegay mareegta in Qaraxa labaad uu ka dhacay afaafka hore illinka laga galo Hoteel Saxafi, gaar ahaan albaabka ku yaalla wadada aadka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaasi oo ay Hoteelo kale ku yaallaan.
Illo wareedyo dhinaca caafimaadka iyo Booliska ah ayaa xaqiijiyay in 30 ruux oo shacab u badan ay ku geeriyootay, halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay.
Warar kale ayaa sheegaya in dhaawaca uu kor u dhaafayo 20 qof oo shacab u badan.
Previous articleWararkii ugu danbeeyay ee Khasaaraha Qaraxyadii Muqdisho (C/fitaax Ilqeyte oo ka mid noqday Dadka lagu dilay)
Next articleSaameyntii uu Siyaasada Soomaaliya ku lahaa Shariix Xasan Sheekh Aadan
XOG: Maxaa ka jira in Hass Petroleum & Farmaajo ay weerareen Hoyga Xamar?
IGAD maku filan tahay xal ka gaarista Khilaafka Soomaaliya & Kenya?
Alya Zainullah oo kamid noqotay Martida Xajka ee Sanadkan “Ogow Sababta”
Ciidamo dheeraad ah oo loo soo dirayo howlgalka AMISOM ee Somalia
Soomaalida degan Sweden oo laga raali geliyey War yaab leh oo laga faafiyey
DHAGEYSO:ONLF oo shaacisay hadal farxad geliyay shacabka kilinka shanaad oo kusaabsan in Abiy Ahmed
AKHRISO: DF oo Digniin culus kasoo saartay Xeebaha Somalia…